Vaovao farany Truedialer amin'ny Material Design miaraka amin'ny 3.0 | Androidsis
Truedialer dia havaozina tanteraka amin'ny famolavolana miaraka amin'ny fanavaozana vaovao
Ny iray amin'ireo antony mahatonga ny fahombiazan'ny Android lehibe dia manome antsika ny fahaizana manamboatra ny toerana rehetra sy ny finday, na ny widgets, ny app fanairana famantaranandro na ny mpilalao mozika. Raha mandroso lavidavitra kokoa isika, dia afaka mametraka ROM toa ny CyanogenMod hitsoroka ao anaty ireo rafi-drakitra hanovana ny zava-drehetra ao amin'ilay fitaovana. Na dia tsy te handeha hamaky tombontsoa ROOT aza isika ary handoto kely ny tanantsika amin'ny "menaka", dia misy fampiharana marobe hatrany izay manamora kokoa, ohatra, ny fanovana ny mpandefa telefaona ho lasa kanto sy miasa kokoa .
Ary izany indrindra no mitranga amin'ny Truedialer, a dialer miaraka amina interface madio sy madio izay manolotra fahatsapana hafa ho antsika rehefa mahazo antso isika na handeha hanao azy ireo ihany. Truedialer dia niakanjo tamin'io fotoana io ary naka anay tamin'izay nahatonga ny Material Design ho malaza amin'ny sarimiaina manaitra sasany ary izay mety ho traikefa hafa amin'ny lafiny antso amin'ny findainao Android.
1 Truedialer, safidy iray amin'ny interface interface
2 Tsy manadino momba ny fanaingoana
Truedialer, safidy iray amin'ny interface interface
nisy navoakan'i Truecaller tamin'ny taona lasa ho an'ny Android ary amin'ity "fotoana fohy" ity dia nahavita nisondrotra teo amin'ny fiarahamonina Android ho toy ny tena fanoloana ilay dialer default izay miaraka amin'ny rafitra Android.
Ary i Truedialer, ankoatry ny zava-baovao momba ny famolavolana Material Design, dia mitondra ny zava-baovao hafahafa ho saha fikarohana natokana hahitana fifandraisana ary ny nomeraon-telefaona amin'ny fomba haingana.
Tsy afaka manadino koa isika ny ID mpiantso anao amin'ny Truecaller. Midika izany fa ny antso avy amin'ny olon-tsy fantatra dia azo fantarina raha misy izy ireo ao anaty tahiry lehibe ananan'ity serivisy ity. Ka mety ho tena ilaina tokoa ny mamantatra isa maromaro izay mety misy ifandraisany amin'ny spam an-telefaona.
Raha hiverenana ny olan'ny fanavaozana ny tenany dia ity ny fanoloran-kevitry ny ekipa fampandrosoana hampivoatra ny sehatry ny mpampiasa. Izany dia hiatrika UI madio sy mazava kokoa isika, mifanaraka bebe kokoa amin'ny mahazatra antsika tato ho ato amin'ny Material Design, noho izany dia tena fifandimbiasan'ny dialer an'ny rafitra Android.
Tsy manadino momba ny fanaingoana
Miaraka amin'izany lohahevitra mazava izany koa misy ny mety hanamboarana azy amin'ny maizina ho an'ireo izay maniry izany hifanaraka amin'ny telefaona sisa. Ny zava-baovao, ny sehatry ny fikarohana, dia miasa amin'ny fomba hafa fa ankoatry ny fikarohana ireo fifandraisana, dia hikaroka telefaona ihany koa izy arak'izay notadiavina. Andao lazaina fa raha manoratra "pizzeria" isika dia hiseho ny nomeraon-telefaonan'ny orinasa akaikin'ny misy antsika. Mety tsy mandeha araka ny tiana izy io, fa rehefa azonao tsara, ny tena izy dia endri-javatra mahasoa io.
Raha fintinina, Truedialer 3.0 dia mandroso mandroso for manatsara izay hita ho dialer amin'ny Android Lollipop, na dia mety tsy fahasamihafana lehibe eo amin'ny endriny noho ny tamin'ny volana vitsivitsy lasa izay. Na izany na tsy izany, dia dialer afaka hisolo tanteraka amin'ny rafitra ary io famantarana io amin'ny antso dia ho mora raisina amin'ny toe-javatra sasany.
tena dialer hita maimaimpoana ao amin'ny Play Store, ka tsy misy fialan-tsiny mety hanandramana azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Truedialer dia havaozina tanteraka amin'ny famolavolana miaraka amin'ny fanavaozana vaovao
Oneplus 2 dia hanana sensor amin'ny dian-tànana